भाग्य न्यौपानेको विरोध गर्नेलाई रबि लामिछानेले दिए यस्तो कडा जवाफ… (भिडियो सहित) « Nepal's number 1 Entertainment news portal
भाग्य न्यौपानेको विरोध गर्नेलाई रबि लामिछानेले दिए यस्तो कडा जवाफ… (भिडियो सहित)
Published : 8 August, 2020 8:56 am
राष्ट्रिय मिडियाको आफ्नै दम्भ छ ,फुर्ती छ , युट्युव जस्ता माध्यमबाट चिनिएका पत्रकारहरुलाई मुलधारका पत्रकार हरू धारे हात लगाउँछन् , पत्रकार नै मान्दैनन् ,सञ्चारकर्मी नै मान्दैनन् । कोही कोही त यो मान्छे नै मान्दैनन् । हो युटुबमा अतिरञ्ज ना छ । पैसा कमाउने प्रतिश्पर्धा छ । घटना भन्दा टाइटल बिक्ने भन्दा टिक्ने खेलो छ । राम्रा र नराम्रा पक्ष कुन विधामा छैनन् ? मूलधारे मिडियाले कतिपय घटना र मान्छेलाई पटक्कै गन्दैनन् तर जनतालाई सूचना त चाहिन्छ । मनोरञ्जन पनि चाहिन्छ । मुलधारका मिडियाले सूचना नदिए पछि आम मानिसहरू बाध्य भएर युट्युव लगाएतका मध्यहरुको भर पर्न विवस छन् ।
कहिल्यै नबोल्ने । अनि जब उसको एउटा गल्ती हुन्छन् अनि १२ हात जति लामो आर्टिकल लेख्ने त ! भाग्य न्यौपाने पपुलर रहेछ भन्ने कुरा उसले एउटा गल्ती गर्दा मात्र थाहा भयो ? उसले त्यत्रो फलोअर्स कसरी कमायो भन्ने बारे पनि सोच्नु पर्ला नि ! शिशिर भण्डारी किश्ण कडेल त्यसै लोक प्रिय भएका होइनन् यिनीहरूले धेरैको जीवन बदलिदिएको पनि छन् ।